China I-Sodium Hyaluronate 1% Abavelisi besisombululo kunye nababoneleli |LI OMNCANE
Umthamo omkhulu wokubamba amanzi unokugcina ukufuma kolusu ngokufanelekileyo .Iimolekyuli ze-Sodium Hyaluronate ziqulethe inani elikhulu lamaqela e-carboxyl kunye ne-hydroxyl, enokuthi yenze i-hydrogen bond bond kunye namanzi kwaye idibanise nomthamo omkhulu wamanzi , ukwenzela ukuba ulusu lugcwele umswakama, luster kunye nokuguquguquka.
1. Umthamo omkhulu wokubamba amanzi unokugcina ukufuma kwesikhumba ngokufanelekileyo.Iimolekyuli ze-Sodium Hyaluronate ziqulethe inani elikhulu lamaqela e-carboxyl kunye ne-hydroxyl, enokuthi yenze i-hydrogen bond bond kunye namanzi kwaye idibanise nomthamo omkhulu wamanzi , ukwenzela ukuba ulusu lugcwele umswakama, luster kunye nokuguquguquka.
2. Gcwalisa isondlo solusu ngokukhawuleza ukuze ulusu luhlaziyeke kwaye lube mpuluswa ngoko nangoko.Ngaphandle koko, iSodium Hyaluronate inokususa ioksijini engasebenziyo iiradicals eziveliswa yimitha yelanga eyingozi kwi-epidermis, ukukhusela ulusu.
3. Lungiselela isakhiwo esixhasayo seseli, uthintele kwaye ulungise umonakalo wesikhumba, kunye nemigca emihle egudileyo.
4. Yenza ulusu luqine kwaye lunwebe, luthintele ukukhululeka kolusu, kwaye lukhuthaze ukujikeleza kwegazi eluswini.Ukuqulunqa Ukulungiselela
Imathiriyeli ekrwada: Amandla eSodium Hyaluronate, 0.2-1% yeAgent yeAntibacteria, Amanzi acocekileyo.
Izixhobo: Imbiza yokulinganisa, iBha yokugobhoza (Ukuvalwa kobushushu obuphezulu okanye ukuvala inzala yeAntibacterial imizuzu eyi-15 iyafuneka.)
1.Yongeza i-100ml yamanzi ahlambulukileyo (hayi amanzi amaminerali) kwikomityi yokulinganisa.
2.put 1g yesodium Hyaluronate amandla kwindebe, kwaye inkqubo yokuxuba kufuneka inyumba ngokulinganayo.
3. Joyina i-Agent ye-Antibacterial, i-8 yehla ngesisombululo se-100ml.
4.Ukuphumla kwiiyure ezingama-24 kude kube kwisisombululo esicacileyo nesicacileyo, isisombululo seSodium hyaluronate sigqityiwe.
I-Sodium Hyaluronate 1% isisombululo asikwazi ukusetyenziswa eluswini ngokuthe ngqo, kufuneka sihlanjululwe ngaphambi kokusetyenziswa.Unokuzama ukugxininiswa okwahlukileyo ngokweemvakalelo zomntu, indawo engqongileyo kunye nolusu olwahlukileyo.Okukhona uxinaniso luphezulu, kokukhona i-viscosity inkulu.
1. Isisombululo esisezantsi sobunzima bemolekyuli singcono xa siyinto yokuthambisa.
2. Inokuxutywa kunye nelotion, i-essence, i-cream, i-moisturizing effect ingcono.
3. Inokongezwa kwi-lotion yeenwele kunye ne-lotion yomzimba.
4. Ingasetyenziswa phambi kwemaski yobuso.
5. Kuba iseti yenza ukusetyenziswa.
Njenge-toner: 1ml isisombululo se-Sodium hyaluronate kunye ne-9 ml ye-hydrosol, ixutywe kwaye inyibilikisiwe, yiza kwi-toner, inokuba imaski yobuso ngephepha lemaski kwaye inokuhlala itshiza amanzi emini, ibe nefuthe elingcono lokuthambisa kunamanzi odwa.
Njengokubaluleka: 2ml isisombululo seSodium Hyaluronate kunye ne-8 ml ye-hydrosol, exutywe kwaye inyibilikiswe, sebenzisa phambi kwekhrimu okanye i-lotion.
Malunga ne-1% -3%: i-viscous ngakumbi, ukusetyenziswa okuxutyiweyo kunye ne-hydrating Essence kunye nezinye iimveliso zokhathalelo lwesikhumba, ezinje ngokubeka ithontsi enye kwi-lotion kunye nekhrimu.
Ngaphantsi kwe-1%: Asetyenziswe njengamanzi emollient ngokuthe ngqo.
1.Nika ingqalelo kucoceko .Amanzi anyibilikisiweyo kufuneka asebenzise amanzi acocekileyo okanye amanzi adityanisiweyo, nceda ungasebenzisi amanzi etephu.Zonke izixhobo kunye nezikhongozeli kufuneka zicocwe kwaye zibulawe iintsholongwane phambi kokusetyenziswa.
Isisombululo se-2.Sodium Hyaluronate ngaphandle kwe-Agent ye-Antibacterial ingagcinwa kwisiqingatha senyanga kwindawo yokugcina ebandayo ngelixa unyaka omnye kwindawo yokugcinwa kweqondo lokushisa kunye ne-Agent Antibacterial.
3.I-Sodium Hyaluronate luhlobo lwe-biological polysaccharide.Nceda uzame ukusebenzisa xa unyibilikisiwe ukuba kukho ulwelo olushiyekileyo , nceda wongeze izigcina-lwazi kwaye uzigcine kwi-cryopreservation.
I-4.Isisombululo se-Sodium Hyaluronate asikwazi ukusetyenziswa kunye ne-cationic surfactant kunye ne-cationic preservatives ukwenzela ukuphepha i-turbidity okanye i-precipitation reaction.
5.Amandla eSodium Hyaluronate kulula ukufunxa ukufuma, imveliso kufuneka itywinwe kwaye igcinwe kwindawo emnyama, emnyama, eyomileyo, ephantsi (2-10 C) indawo.
Ngaphambili: I-Cosmetcs yeBanga le-Y-polyglutamic acid
Okulandelayo: Ukutya kwiBanga leSodium hyaluronate
Imisonto emininzi 23G-38mm/60mm L-uhlobo
IBanga lezoLimo iGamma Polyglutamic Acid (γ-P...
Uqhagamshelwe emnqamlezweni HA – Derm Deep (1mL , 2mL)
ICross Linked Hyaluronic Acid Iasidi yeHyaluron Pdo Cog Imisonto Injectable Hyaluronic Acid iDermal Filler Isigcwalisi seDemal esitofwayo